धूमधामका साथ बडा मंगलवार मनाईंदै – Sadarline
नेपालगञ्ज : विश्वको रचना गर्नेलाई भगवान भनिन्छ र संकटबाट मुक्ति दिनेलाई हनुमान भनिन्छ । जेष्ठ महिनाको आज तेश्रो बडा अर्थात् ठुलो मंगलवार मनाईंदै छ । नेपालगञ्ज र आसपासका क्षेत्रसहित सीमावर्ती भारतीय बजार रुपईडिहामा धुमधामका साथ बडा मंगलवार मनाईंदै छ ।
सो अवसरमा नेपालगञ्जका विभिन्न हनुमान मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेको घुईंचो लागेको थियो भने भक्तजनहरुले अधिकाँश ठाउँमा टेन्ट लगाएर बटुवाहरुलाई प्रसाद र पानी वितरण गरेका थिए । बडा मंगलवाका अवसरमा हिरमिनियालगायत आसपासका गाउँमा बेलुका सुन्दरकाण्ड पाठका साथै कीर्तनभजन हुने गरेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष मोहनराम मिश्रले बताए ।
नेपालगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रअगाडी प्रसाद वितरण गरिँदै ।
यस दिन श्री हनुमान जीको पूजाआजा गर्नाले अत्याधिक फलको प्राप्ति हुन्छ । कलयुगमा श्री हनुमान जीको पूजा गर्नाले सबै संकटबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । भगवान रामका अनन्य भक्त हनुमानमा जस्तो ठूलो संकट पनि एकक्षणमा दूर गर्नसक्ने क्षमता रहेको रामायणमा उल्लेख छ । २१ मे को जेष्ठ मासको कृष्ण तृतीयाबाट पहिलो बडा मंगलवारको शुरुवात भएको हो ।
यस्तै मे २८ तारिखमा दोश्रो ठूलो मंगलवार मनाइएको थियो । आज भने जुन ४ तारेखका दिन तेश्रो मंगलवार मनाईंदैछ । यस्तै अन्तिम र चौथो मंगलवार जून ११ तारेखका दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रसँगै कर्क राशिमा पर्ने शास्त्रविदको भनाई छ ।
उक्त दिन सिद्ध योग रहने र मनको कारक चन्द्रमा पनि आफ्नै राशिमा रहेको र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका स्वामी सूर्यसँगै भएकोले सूर्य तथा चन्द्रमाको मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ । फलस्वरुप यस पटक जेठको चारवटै मंगलवार शुभयोगमा परेको ज्योतिषीहरुले जनाएका छन् ।
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगरले इस्लाम धर्मावलम्वीको महान पर्व ईदका अवसरमा गरीब विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेकी छन् । उनले मंगलवार डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ हिरमिनिया सुव्वापुर्वाका १० जना बालबालिकालाई झोला, कपी, कलमलगायतको शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेकी हुन् । घोडा खच्चड पालकका छोराछोरीमध्ये पहिलो पटक स्कुल […]
१९ श्रावण २०७६, आईतवार १९:४१